居住支援事業/相談窓口 - PHD協会
ホーム > 居住支援事業/相談窓口
本動画は、赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン 居場所を失った人への緊急活動応援助成金により作成したものです。
Video này được tạo nhằm trợ cấp, hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp đối với người mất nơi ở thông qua chiến dịch toàn quốc trợ cấp, hỗ trợ phúc lợi AKAI HANE dưới sự lây nhiễm của đại dịch corona.
အခုဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ ‘ငှက်မွှေးနီ (RED FEATHER) ‘ လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းက ကိုရိုနာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်‌နေပြီး နေထိုင်ရာအိမ်မရှိသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အရေးပေါ် ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့်ကူညီပေးထားမှုများကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Chúng tôi hỗ trợ các vấn đề như :hỗ trợ nhà ở cho những người thật sự cần thiết đặc biệt về bảo hộ nhà ở ( người ngoại quốc, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ gia đình đơn thân), cung cấp thông tin, tư vấn.
လုံခြုံသောနေထိုင်ရာအိမ်လိုအပ်သောသူများ(နိုင်ငံခြားသား၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မသန်မစွမ်းများ၊ စင်ဂယ်မားသား)အား အိမ်ယာထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ တိုင်ပင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
Vì một xã hội mọi người cùng chung sống, hiệp hội PHD chúng tôi đã thành lập quầy tư vấn cho những người ngoại quốc đang sống tại Nhật Bản. Những bạn đang đối mặt với vấn đề khó khăn về bảo hộ nhà ở và sinh hoạt hãy liên hệ cho chúng tôi qua điện thoại hoặc email ( ở bên dưới ).
ယခုအဖွဲ့အစည်းသည် 「ပျော်ရွှင်စွာ‌အတူတကွနေထိုင်ကြစို့」ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကောင်တာအား ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါသည်။ နေထိုင်ရာအိမ် ၊ ဘဝနေထိုင်မှု တို့တွင် အဆင်မပြေခက်ခဲနေသောလူအများသည် ဖုန်းဖြင့်သော်လည်ကောင်း မေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
相談時間：月～水、金　10:00~17:00　木　10:00~18:00
Thời gian tư vấn : Thứ5từ 10 giờ-18 giờ. Những ngày thường còn lại từ 10 giờ – 17 giờ
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချိန် ：တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ – မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ , ‌ကြာသပတေး မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ
Số điện thoại : 078-414-7750
(Quầy tư vấn, hỗ trợ nhà ở )